Paxful, Inc. (sidoo kale loo yaqaano “Paxful,” “anaka,” “lafta yada,” ama “waxa yaga”) waxay qaadaysaa talaabooyin si aan sare u gu qaadno wax soo saarka yaga aana xal amaan ah u siino macaamiisha yada. Xeerkaan Abaalmarinta soo Sheegida Ciladaha (“Xeerka”), waxaan ku faahfaahinaynaa xaalado khuseeya Barnaamijka yaga Abaalmarinta soo Sheegida Ciladaha iyo sida loo isticmaalayo taasoo xiriir la leh isticmaalkaaga websaytkahttps://paxful.com/, ay kamid yihiin laakiin aan ku koobnayn, Kiishadda Paxful, shabakadda ganacsiga Bitcoin ee onleenka ah, aaladaha moobilka, bogagga baraha bulshada, ama hantida kale ee onleenka ah (wadar ahaan looyaqaano, “Websaytyada”), ama marka aad isticmaasho wax kamid ah wax soo saarada, adeegyada, waxyaaha kujira, qaybaha, teknoolojiyadaha, ama shaqooyinka aan bixino (wadar ahaan loo yaqaano, “Adeegyada yada”). Xeerkaan waxaa loo sameeyay in uu kaa caawiyo in aad hesho macluumaad ku saabsan sida aad uga qayb qaadan karto Barnaamijka yaga Abaalmarinta soo Sheegida Ciladaha, kaasoo natiijooyin cilmibaaris amaan ah ay khusayn karto, kaasoona faaidooyin aad ka heli karto. Fadlan ogsoonow in bixinta Adeegyada yadu ku kala duwanaan karaan gobol ahaan.
Dhammaan ujeedooyinka, nooca luuqadda Ingiriiska ah ee xeerka abaalmarinta soo sheegida ciladaha ayaa ahaanaya kan asalka ah, qalabka wax maamulaya. Marka ay dhacdo wax iska horimaad ah oo u dhexeeya nooca luuqadda Ingiriiska ah ee xeerkaan abaalmarinta soo sheegida ciladaha iyo tarjumaad kasta oo daba socota oo luuqad kale ah, nooca luuqadda Ingiriiska ah ayaa maamulaya oo xakamaynaya.
Waa maxay Barnaamijka Abaalmarinta soo Sheegidda Ciladaha?
Si sare loogu qaado Paxful iyo Adeegyada, Barnaamijka Abaalmarinta soo Sheegidda Ciladaha wuxuu isticmaaleyaasheena siiyaa fursad ay ku heli karaan abaalmarin lagu siinayo soo sheegida ciladaha dhanka farsamada ah.
Sidee ayaad noogala hadli kartaa Barnaamijkaaga Abaalmarinta soo Sheegida Ciladaha?
Dhamaan xiriirada noocaas ah waa in lagu hagaajiyaa [email protected]. Marka aad gudbinayso fadlan caddee tafaasiil buuxda oo ah nuglaanshaha iyo caddayn la xaqiijin karo oo ah in nuglaanshuhu ay jirto (sharaxaad / talaabooyinka dib usoo saarista / sawirka shaashadda / muuqaalada / qoraalada ama waxyaabaha noocaas ah).
Ku xadgudubka wax kamid ah shuruucdaan waxaa ka dhalan kara in aadan xaq u yeelan abaalmarinta.
Tijaabi nuglaanshaha kaliya koonto aad adigu leedahay ama koontooyin aad fasax ka haysato cidda leh koontada si aad u tijaabiso.
Marna ha isticmaalin natiijo si aad uga tagto/aad xaddo xog ama aad ku xirto hanaan kale. Isticmaal caddaynta fahamka kaliya si aad u muujiso ciladda.
Haddii macluumaadka xasaasiga ah sida macluumaadka shaqsiga ah, macluumaadka koontada lagu galo, iyo wixii lamid ah loo galo si qayb ka ah nuglaanshaha, ma ahan in la kaydiyo, meel la dhigo, la wareejiyo, la galo, ama haddii kale la diyaariyo soo heliddii hore kaddib.
Waxaa dhici karta in cilmi baare yaasha aysan, aanan loo ogolaan in ay sameeyaan wax howl ah taasoo wax u gaysan karta, waxyeelayn karta ama khatar ku ah Paxful.
Cilmibaareyaashu waa in aysan si guud u shaacin nuglaanshaha (aysan la wadaagin tafaasiisha ama wax kale cid aan ka ahayn shaqaalaha loo ogolaaday ee Paxful), ama waa in aysan la wadaagin nuglaanshaha qaybta saddexaad, ayaka oo aan haysan fasaxa degdega ah ee Paxful.
Sideen u qiimeynayaa ciladaha lagu ogaaday Barnaamijka Abaalmarinta soo Sheegidda Ciladaha?
Dhammaan ciladaha waxaa lagu qiimaynayaa ayadoo la isticmaalayo qaab khataraha loogu tala galay.
Kahor inta aanaan bilaabin ka wadahadlidda tafaasiil kasta oo la xariirta ciladaha la soo ogaaday kuwaas oo aad ku sheegtay Barnaamijka Abaalmarinta soo Sheegida Ciladaha dhexdiisa, kaasoo ay kamidka yihiin magdhow, iyo wixii lamid ah, waxaa lagaaga baahnaan doonaa in aad nala gasho Heshiis Qarsoodi ah.
Sideen u bixinaa abaalmarinada Barnaamijka Abaalmarinta soo Sheegida Ciladaha?
Dhammaan abaalmarinada noocaas ah waxaa bixiya Paxful. Dhammaan abaalmarinada waxaa kaliya la bixin karaa haddii aysan ka horimaanayn shuruuc iyo nidaam kasta oo khuseeya, kaasoo ay kujiraan laakiin aan ku koobnayn cunaqabataynta ganacsiga iyo xannibaadaha dhaqaale.
Wakhti intee le'eg ayay nagu qaadanaysaa in aan falanqayno natiijooyinkaga Barnaamijka Abaalmarinta soo Sheegida Ciladaha?
Ayada oo ay sabab u tahay kala duwanaanshaha iyo adkaanta dabeecadda ciladaha farsamo, ma aanaan samayn wakhti loogu tala galay oo loo qabtay in lagu falanqeeyo natiijooyinka kujira Barnaamijka Abaalmarinta soo Sheegida Ciladaha. Falanqaynta yadu waxay kaliya dhammaanaysaa marka aan xaqiijino jiritaanka iyo la'aanshaha nuglaanshaha.
Waa maxay xaaladaha laga reebay Barnaamijka Abaalmarinta soo Sheegida Ciladaha?
Nuglaanshaha qaar waxaa loo tixgalinayaa in uu ka baxsan yahay shaqada Barnaamijka Abaalmarinta soo Sheegida Ciladaha. Kuwaas ka baxsan shaqada nuglaanshaha waxaa kujira, laakiin aan ku ekayn:
Nuglaanshaha u baahan injinerada dhanka arimaha bulshada/khayaanada bulshada;
Ciladaha kutiri kuteenta ah kuwaas oo aan lahayn saamayn la taaban karo;
Nuglaanshaha dhanka amaanka ah ee kajira aaladaha qaybta saddexaad iyo webseedyada qaybta saddexaad ee kujira Paxful;
Waxyaabaha uu keeno qalabka wax lagu scan gareeyo ama warbixinada uu soo saaro qalabka wax lagu scan gareeyo;
Arimaha lagu helo tijaabooyinka iskood ah;
Dhibaatooyinka sida guud loo soo daayo ee kajira softiweerka internet-ka 30 maalmood gudahood shaacintooda kaddib.
Weerarada u Dhexeeyaha Labada Qaybood;
Weerada ciwaanka haystaha ayada oo aysan jirin saamayn gaar ah, oo la muujin karo;
XSS-yada laftooda, kaasoo uu kamid yahay macluumaadka uu galiyay dhibanuhu;
CSRF-ta galitaanka/ka bixista;
Haddii aad raadinayso macluumaad dheeraad ah oo khuseeya Xeerkaan, waxaad nagala soo xiriiri kartaa adiga oo iimayl noogu soo diraya[email protected].